I-45% Yokukhishwa kokubhaliselwe kwe-Vero Email Automation
NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, i-2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, i-2014 Douglas Karr
I-Vero isevisi yokuthengisa ezenzakalelayo ye-imeyili egxile ekwandiseni ukuguqulwa komsebenzisi nokugcinwa. Usebenzisa ama-imeyili aqondisiwe ungangenisa imali ekhuphukile futhi uthuthukise ukwaneliseka kwamakhasimende.
Martech Zone abafundi bangathola I-45% isephulelo sokubhalisile sezinyanga eziyisithupha sohlelo lweVero Small ngokusebenzisa isixhumanisi sethu sokuxhumana!
I-Vero Email Marketing Ifaka phakathi
Amaphrofayli amakhasimende ngamanye - Landelela idatha mayelana namakhasimende akho ku-database yakho yobhalisile. Sebenzisa idatha oyiqoqayo njengamagama amakhasimende akho, izindawo, neminyaka ukuhlukanisa i-database yakho bese uthumela ama-imeyili aqondisiwe. Ngokuhamba kwesikhathi uVero ulandelela ngokuzenzakalela izenzo zamakhasimende ngamanye kuwebhusayithi yakho kufaka phakathi amakhasi abiwavakashelayo, amafomu abawathumelayo nezinkinobho abazichofozayo. Buka noma iyiphi iphrofayili yekhasimende nganoma yisiphi isikhathi, kufaka phakathi umlando ogcwele wama-imeyili owathumele wona nezenzo zawo ngemuva kokuwathola.
Amaphephandaba eDynamic - dala izingxenye ezinamandla, zesikhathi sangempela ngokususelwa kulokho okwenziwe amakhasimende (Isibonelo: Ikhasi lamanani avakashelwe amahlandla ama-4 esikhathini esedlule) noma izakhiwo zawo (Isibonelo: eYurophu). Thumela izincwadi zezindaba kuwo wonke amakhasimende wakho noma usebenzise phansi usebenzisa izingxenye ozidalile ukuthumela umyalezo ofanele kumakhasimende afanele. (Isibonelo: ubhalisele isivivinyo samahhala kepha akazange akhokhe).
Isivivinyo se-A / B - Ukuhlolwa kukuvumela ukuthi uthole ukuthi yimiphi imigqa yezihloko, evela kumakheli, ikhophi yomzimba noma izifanekiso amakhasimende akho ahlobene nokuhle - kukunikeza ithuba elengeziwe lemali engenayo. Ukuhlolwa kwe-A / B ngemikhankaso yakho ezenzakalelayo neyezindaba kulula ngeVero. Mane nje ungeze ukuhluka kunoma yimuphi umkhankaso owudalile futhi uchaze amaphesenti wokuhlukanisa bese uVero azobika ngokunye.
Tags: ukuhlolwaamaphrofayli amakhasimendeizincwadi zezindaba ezinamandlai-imeyili ezenzakalelayoukumaketha kabushaingxenyeumgomoqalisaama-imeyili adalwe ngumsebenzisivero